साइटिस ( CITES) भनेको के हो ?
- वन्यजन्तुको अवैध व्यापार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) को छोटकरी नाम साइटिस हो ।
- दुर्लभ तथा संकटग्रस्त जीवजन्तु तथा वनस्पतिको अवैध कारोवार तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले IUCN को तत्ववधानमा ३ मार्च सन् १९७३ मा एक वहुपक्षीय सन्धीको रुपमा हस्ताक्षर भएर स्थापीत CITES सन् १९७५ जुलाई १ देखि लागु भएको हो ।
- यसको मुख्यालय वाशिगंटन डि.सी. (USA) मा छ ।
- CITES ले संरक्षणको सूची तयार गर्दछ । यसले तयार गरेको सानो तथ्यांक पुस्तिकालाई Red List/Red Data Boolभनिन्छ यसले विश्वभरिका वन्यजन्तुको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी दिन्छ । यस पुस्तिकाले विश्वभरि पाइने सम्पूर्ण वन्यजन्तुलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरी तिन प्रकारको अनुसुचीमा वर्गिकरण गरेको छ ।
- पहिलो सूचीमा लोप हुने स्थितिमा पुगेका वन्यजन्तु पर्दछन् ।
- दोस्रोसूचीमा लोप हुने स्थितिमा पुगी नसकेका तर तिनको संरक्षण गर्नुपर्ने आश्यक ठानेका प्रजातिलाई समावेश गरिन्छ ।
- तेस्रो सूचीमा कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रमा पाइने कुनै प्रजातिको वन्यजन्तुको व्यापार प्रतिवन्ध लागाउन आश्यक ठानेका प्रजातिलाई समावेश गरिन्छ ।
1 सन् २०१४ मा सर्वाधिक मूल्यवान ब्राण्डहरु
2 Career News and Info जेठ १०, २०७४
3 बारकोड के हो ?
4 पशुपक्षीको संख्या (कृषि गणना २०६८)
5 Career News and Info असार १५, २०७४
6 Career News and Info जेठ २१, २०७४
7 Career News and Info असार १६, २०७४
8 Cardinal, Ordinal and Nominal Numbers